धनी र गरिब पढ्ने एउटै विद्यालय बनाऔँ , १३ जेठ २०७७
शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट, के–के कार्यक्रम परे ? सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ , १५ जेठ २०७७
कोरोना जितेर घर फर्किए पत्रकार रमण कोरोना संक्रमण भएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको आइसोलेसनमा उपचार गराइ रहेका पत्रकार विरेन्द्र रमण आज डिस्चार्ज भएका छन् । रमणलाई नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्र र महासंघका प्रदेश सचिव किरण कर्णले आइसोलेसन वार्डमा पुगेर माला र अबिर लगाएर स्वागत गरेको थए । १५ जेठ २०७७
तलब नबढेपछि बालविकासका शिक्षक र कर्मचारी निराश विज्ञहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर अहिले पनि २० प्रतिशत पुग्न सकेन , १५ जेठ २०७७
तलब नबढेपछि ईसीडीका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित सरकारले तलब नबढाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले तलब बढाउन माग गर्दै ‘न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न दबाब दिऔँ’ भन्ने अभियान चलाएका छन् , १६ जेठ २०७७
निजी विद्यालयमाथि विभेद भयो : नेसनल प्याब्सन राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारले निजी विद्यालयलाई विभेद गरेको बताएको छ , १६ जेठ २०७७
सरकार ! सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न खोजिएको हो ? निजीले जिम्मा नै लिने भन्ने किसिमको आयो । दोहोरो सिकाइ भएन । सरकारीमा पनि राम्रा शिक्षक छन् । त्यसैले सरकारीकाले निजीलाई सिकाउने । निजीका राम्रा शिक्षकले सरकारीलाई सिकाउने हो । निजी जान्ने छ । सरकारी जान्ने छैन भन्ने सन्देश आयो , १६ जेठ २०७७
शिक्षा मन्त्रालयकाे प्रस्तावविना नै सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई ! शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताएका छन् , १८ जेठ २०७७